के खोप लगाउँदा कोरोना लाग्दैन? – Health Post Nepal
के खोप लगाउँदा कोरोना लाग्दैन?
२०७७ फागुन ८ गते १८:०७
कोरोना रोपबारे विभिन्न भ्रम सुन्ने गरिन्छ। कसैले खोप परीक्षणको क्रममा रहेकाले लगाउन नहुने तर्क गरिरहेका हुन्छन् त कसैले खोप लगाइसकेपछि पनि कोरोना हुने भएकाले लगाउनुको कुनै सार्थकता नभएको बताइरहेका हुन्छन्।
तर, बरिष्ठ सरुवारोग विषेशज्ञ डा. वाशुदेव पाण्डे त्यस्ता भ्रममा नपर्न आग्रह गर्छन्। कारोना खोपले ६० देखि ६३ प्रतिशतसम्म काम गर्ने भएकाले त्यस्तो भ्रममा नपर्न उनको आग्रह छ।
‘खोपले भाइरससँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने हो। कोभिड–१९ सँग लड्ने क्षमता यसले बढाउँछ। अहिले नयाँ फैलिएको भाइरससँग लड्ने क्षमता बढाउने होइन’, उनले भने।
यसले कति समयसम्म काम गर्नसक्छ भन्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको उनी बताउँछन्।
उनी यो रेविजको खोप जस्तो एक पटक लगाए सधैका लागि ढुक्क नहुने बताउँछन्। खोप चार हप्ताको ज्ञापमा लगाउँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
खोप लगाउँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्ने भएकाले विभिन्न खाले चर्चा गर्नु वा भ्रममा पर्नुभन्दा खोप लगाउनु उपयुक्त हुने उनी बताउँछन्।
बैज्ञानिकले अनुसन्धान गरेर प्रमाणित भइसकेको खोपका बारेमा विभिन्न भ्रम पाल्नु राम्रो नहुने उनको भनाई छ।
यस्तै जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. रविन्द्र पाण्डे कोरोना खोप लगाउँदा अपांग भइन्छ, नपुंक भइन्छ, बाझोपन ल्याउँछ भन्ने जस्ता भ्रममा कसैले पनि पर्न नहुने बताउँछन्।
‘हैजा फैलिँदा पनि धेरै पानी पिउन हुँदैन। धेरै पानी पिउँदा झनै पखाला बान्ता भएर मानिस मर्छ भन्ने भ्रम फैलिएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘सुरुमा मानिसमा यस्ता डर हुनु स्वभाविकै पनि हो। तर, त्यस्ता कपोकल्पित भ्रम पाल्नु गलत हो।’
युरोप तिर दोस्रो लहरमा कोरोना फैलिएर ठूलो मानविय क्षति भइरहेको समयमा नेपालले समयमै खोप पाउनु खुशीको कुरा भएको डा. पाण्डे बताउँछन्। युरोपमा एक डोज खोप पाए तीन महिना जोगिएर अवस्था सामान्य बन्थ्योकी भन्ने आसामा नागरिक रहेको बताउँदै उनले सहज रूपमा खोप पाइरहेको बेला नेपालीले डराउन नहुने बताए।
‘नेपाललाई भारतले कोभिसिल्ड उपहार दिएको छ। हामीले बेलायतमा रिसर्च भएको खोप लगाउन पाएका छौं। यो खोप सुरक्षित छ।’
खोप लगउँदा सामान्य लक्षण देखिनु खोपले काम गरेको र शरीरले इम्युन रेस्पोन्स देखाएको भन्ने भएको उनी बताउँछन्। यस्ता लक्षण ७२ घन्टासम्म देखिनुलाई सामान्यरूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
‘खोप लगाएको २२ दिनदेखि एन्टिबडि बन्न थाल्छ। ९० दिनसम्म ६७ प्रतिशत कोरोना सर्ने जोखिम कम हुन्छ। मृत्यु हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ। चार हप्तामा खोपको दोस्रो डोज लगाउँदा ५४.९ र १२ हप्तामा खोप लगाउँदा ८२.४ प्रतिशत प्रभावकारी हुन्छ’, उनी भन्छन्।
खोप लगाएको मानिसले जनस्वास्थयका मापदण्ड नअपनाए कोरोना हुने सम्भावना रहने डा. पाण्डेले बताए। उनले खोप लगाएको मान्छेमा कोरोनाले असर गर्ने सम्भावना न्युन हुने भए पनि त्यो व्यक्तिबाट अन्य मानिसमा सर्दा कोरोनाले असर गर्ने भएकाले सबैले जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने डा. पाण्डे बताउँछन्।